Blagoslovio - Kroatisch - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: blagoslovio (Kroatisch - Burmees)
blagoslovio vas jahve koji stvori nebo i zemlju!
သင်တို့သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန် ဆင်းသော ထာဝရဘုရား ကောင်းကြီးပေးတော်မူသော သူ ဖြစ်ကြ၏။
zemlja plodom urodila! bog nas blagoslovio, bog na!
ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူဦးမည်။ မြေကြီးစွန်းအပေါင်းတို့သည်လည်း၊ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။
"blagoslovio te sa siona jahve koji stvori nebo i zemlju!"
ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ သော ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်က၊ သင့်ကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ စေသော။
ထိုသို့သောအားဖြင့် မြေကြီးသားတို့သည် အမှုတော်တို့ကို သိ၍၊ ခပ်သိမ်းသော လူမျိုးတို့သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကို ခံရကြပါစေသော။
a aul odgovori: "blagoslovio vas jahve to ste me poalili!
ရှောလုက၊ သင်တို့သည် ထာဝရဘုရား ကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူ ဖြစ်ပါစေသော။ သင်တို့သည် ငါ့ကိုသနားကြပြီ။
esti amiel, sedmi jisakar, osmi peuletaj, jer ga je blagoslovio bog,
ဆဋ္ဌမသားအမျေလ၊ သတ္တမသားဣသခါ၊ အဌမသားပုလသဲတည်း။ ဩဗဒေဒုံကို ဘုရားသခင် သည် ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။
ယေရုရှလင်မြို့၌နေခြင်းငှါ အလိုလို ဝန်ခံသော သူအပေါင်းတို့ကို၊ လူများတို့သည် ကောင်းကြီးပေးကြ၏။
blagoslovio te jahve sa siona, uivao sreæu jeruzalema sve dane ivota svog!
ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်က ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍၊ ယေရုရှလင်မြို့ခံရသော ကောင်းကျိုးကို တသက်လုံးမြင်ရလိမ့်မည်။
abraham bijae veæ ostario, zaao u godine, jahve je abrahama blagoslovio u svemu.
အာဗြဟံသည်အို၍၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လှပြီ။ ထာဝရဘုရားသည်၊ အရာရာ၌ သူ့ကို ကောင်းကြီး ပေးတော်မူပြီ။
တန်ခိုးကြီးသောအရှင်၊ ဘုန်းအသရေတော် ဖြစ်သော ကိုယ်တော်၏ထားကို ပေါင်တော်၌ စည်း တော်မူပါ။
doista, taj melkisedek, kralj alemski, sveæenik boga svevinjega to je izaao u susret abrahamu koji se vraæao s poraza kraljeva i blagoslovio ga,
မင်းကြီးများကို လုပ်ကြံရာမှ ပြန်လာသော အာဗြဟံကို ခရီးဦးကြိုပြု၍ ကောင်းကြီးပေးပြီးလျှင်၊
zar nisi ogradio njega, kuæu mu i sav posjed njegov? blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnoila po zemlji.
ကိုယ်တော်သည် သူ့ကိုယ်မှစ၍ သူ့အိမ်နှင့် သူ့ဥစ္စာ ရှိသမျှ ပတ်လည်၌ စောင်ရန်းကာတော်မူသည် မဟုတ်လော။ သူပြုလေသမျှတို့ကို ကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီ။ သူ့သို့းနွားအစရှိသော တိရစ္ဆာန်တို့သည် မြေပေါ်မှာ အလွန်ပွားများကြပြီ။
o josipu reèe: zemlju mu je jahve blagoslovio; njegovo je najbolje od onog to daje rosa nebeska i to se u bezdanima dolje krije!
ယောသပ်အမျိုးကိုကား၊ ထိုအမျိုးနေသော ပြည် သည် အထက်မိုဃ်းကောင်းကင် ဘဏ္ဍာအားဖြင့်၎င်း၊ အောက်အရပ်၌ ပုန်းကွယ်၍ နက်နဲသော အရာအားဖြင့်၎င်း၊
tada dri blagdan sedmica u èast jahvi, bogu svome, prinoseæi dragovoljni prinos iz svoje ruke, kako te veæ jahve, bog tvoj, bude blagoslovio.
ta i jahve je est dana stvarao nebo, zemlju i more i sve to je u njima,asedmoga je dana poèinuo. stoga je jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် မိုဃ်းကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာ၊ အရပ်ရပ်၌ရှိသမျှတို့ကို ခြောက်ရက်တွင် ဖန်ဆင်း၍ သတ္တမနေ့ရက်၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူ၏။ ထိုကြောင့် ထာဝရဘုရားသည် သတ္တမနေ့ရက်ကို ကောင်းကြီးပေး၍ သန့်ရှင်းစေတော်မူ၏။
sve su to izraelova plemena - dvanaest ih na broj - i to im je otac rekao kad ih je blagoslivljao; svakoga je od njih blagoslovio njegovim blagoslovom.
ဤသူတို့ကား၊ ဣသရေလအမျိုး ဆယ်နှစ်မျိုး ဖြစ်၏။ ဤစကားသည်လည်း သူတို့အဘမြွက်ဆို၍၊ သူတို့ အသီးသီးခံရသော မင်္ဂလာရှိသည်အတိုင်း၊ ကောင်းကြီး ပေးသော စကားပေတည်း။
သင်တို့၏အဘ အာဗြဟံနှင့်၊ သင်တို့ကို ဘွား သော သူစာရာတို့ကို ကြည့်ရှုကြလော့။ ငါသည် တယောက်တည်းသောသူ အာဗြဟံကို ခေါ်၍၊ ကောင်း ကြီးပေးသဖြင့် များပြားစေ၏။
daruj ga èime izmeðu stoke svoje, s gumna svoga i iz badnja svoga; èime te veæ jahve, bog tvoj, blagoslovio, od toga i njemu daj.
သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် ကောင်း ကြီးပေးတော်မူသည်အတိုင်း၊ သင်၏သိုးစု၊ ကောက်နယ် တလင်း၊ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းထဲက များစွာပေးရမည်။
"jahve je uvelike blagoslovio moga gospodara te je postao bogat. nadavao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i slukinja, deva i magaradi.
ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်ုပ်၏သခင်ကို အလွန် ကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်၊ သူသည်ကြီးမြတ်ခြင်းသို့ ရောက်လေပြီ။ သိုးစု၊ နွားစု၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျွန်ယောက်ျား၊ ကျွန်မိန်းမ၊ ကုလားအုပ်နှင့်မြည်းများတို့ကို ပေးတော်မူပြီ။
ezav zamrzi jakova zbog blagoslova kojim ga je otac njegov blagoslovio pa reèe u sebi: "Èim doðu dani alosti za mojim ocem, ubit æu ja svoga brata jakova."
အဘသည် ယာကုပ်အား ပေးသော ကောင်းကြီး မင်္ဂလာကြောင့်၊ ဧသောသည် ယာကုပ်ကို အငြိုးထား၍၊ ငါ့အဘကြောင့် ညည်းတွားရသော နေ့ရက်ကာလ အချိန် နီးပြီ။ ထိုအခါ ငါ့ညီယာကုပ်ကို ငါသတ်မည်ဟု၊ အကြံနှင့် ပြောလေ၏။
hindi na muna kita aabalahin (Tagalog>Engels)baon mo sarili mo (Engels>Tagalog)taga ihaw ng baboy (Tagalog>Engels)okey na ako kalimutan mona ako (Tagalog>Italiaans)selective mutism (Engels>Grieks)kiwi isasmallest bird in the world an (Hindi>Engels)this reality isabeautiful illusion (Engels>Hindi)uma bela mulher (Portugees>Italiaans)ja, gefällt mir sehr (Duits>Japans)os (Indonesisch>Zoeloe)can you give me one minute? (Engels>Italiaans)aquanaut (Engels>Frans)nicht in der lage zu sein helfen zu können (Duits>Engels)maxalot (Hebreeuws>Portugees)ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ (Panjabi>Engels)flushed (Engels>Italiaans)naleul johahae (Koreaans>Engels)हिंदी सेक्सी video hb(Hindi>Engels)a mi me tus pendientes (Spaans>Engels)既然美国的民调不准 (Chinees (Vereenvoudigd)>Thaise taal)loobin nawa (Tagalog>Engels)सेक्सी मूवी xxcbdohd hindi (Engels>Hindi)waiting my story (Engels>Hindi)pour se loger dans les organes cibles (Frans>Engels)appel demain quand tu veux (Frans>Engels)